Mumwe mudzimai akanzingwa papurazi raVaPhilip Chiyangwa pedyo neChinhoyi
Vanhu vanosvika mazana maviri vakapisirwa dzimba dzavo dzavo nemapurisa papurazi raVaPhillip Chiyangwa reSinoa Citrus Farm pedyo neChinhoyi nemusi weMuvhuro.
Mumwe wevakapisirwa dzimba vanoti Havana kwekuenda ndiVaPatrick Mafusire avo vanotenda havo kuti havana gwaro rekuti vagare papurazi iri ravanoti ndere kanzuru yeChinhoyi kwete VaChiyangwa.
Musi weChishanu dare rakapa mutongo wekuti purazi iri nderaVaChiyangwa. VaMafusire vanoti sezvo dare rakapa mutongo neChishanu vangadai vapihwa mazuva ekuti vabve kwete kuitwa zvekupisirwa zvinhu zvavo.
VaChiyangwa vakakwidza nyaya iyi kumatare vachiti vanhu ava vairambira papurazi ravo. Mumwe akapisirwa midziyo nehuku dzake ndiAmai Juliet Nyakudya vanoti chakavashamisa ndechekuti vanhu vakapisa zvinhu zvavo vashandi vaVaChiyangwa kunyange mapurisa aivapo.
Patabvunza mapurisa kuti vanhu vari kubviswa papurazi iri vari kuiswa kupi, mutauriri wemapurisa VaPaul Nyathi vanoti ivo vari kubatsira chikonzi kubvisa vanhu asi kuti vari kuiswa kupi hapana chavanoziva.
Nyaya yekuti purazi reCitrus nderani yave nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. VaChiyangwa vanoti vakapihwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba.
Asi kusvika parizvino havasai vapihwa tsamba idzi zvakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuru yeChinhoyi kumatare vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa yavakanyorera kuti vapihwe muna 2016.
Purazi iri rakakura mahekita zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi masere nemasere kana kuti 3, 447 hectares.